Umbuzo Sawubona ....
iminyaka 2 6 izinyanga ezedlule #697 by PAYSON
Sekude kakhulu kusukela ngivakashele iforamu. Sawubona kuwo wonke amalungu amasha. Uvele utholile futhi waba ngamalungu weZINDABA EZINTSHA zomusa. Awuzange wenze iphutha ngokwenza kanjalo, nginezinto ezibukwayo futhi mayelana nezindiza ze-50, konke kuphephile ngokuphelele. Ngiyazi uma ufika esiteshini le ngqondo ehlabayo, awunamathemba ngaso sonke isikhathi. Uyazi .... (uma kubonakala kuhle kakhulu, kungenzeka ukuthi). Awulapha .... afana ne-12 noma i-13 iminyaka ezinkingeni ze-biz ne-0. Geeeez ... Ngizwakala njengabadayisi be-frickin. Ngikuqinisekisa, angikho. Kodwa noma kunjalo, wamukelekile kuwe amalungu amasha.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Yustinzz
iminyaka 2 6 izinyanga ezedlule #701 by Derrick1224
Ngavele ngabamba P3D I-V4 futhi le ndawo isindisa impilo. Nginokuthile okufanele ngindize ngize ngikwazi ukukhokhela isengezo sokuthembeka okuphezulu.